Javi Martinez Oo Si Maldahan U Sheegay Inuu Ka Tagayo Bayern Munich
HomeHoryaalka GermalkaJavi Martinez oo si maldahan u sheegay inuu ka tagayo Bayern Munich
December 1, 2020 Horyaalka Germalka, Wararka Ciyaaraha 0
Halyeeyga Bayern Munich Javi Martinez ayaa ka dhawaajiyay inuu ka tagi karo kooxda ku guuleysatay Bundesliga iyo Champions League markii qandaraaskiisu dhacayo xagaaga soo aadan.
Martinez ayaa si joogto ah ugu ciyaarayay kooxaha Bayern tan iyo markii uu yimid 2012 waxana uu haatanba 13 jeer u ciyaaray kooxda Bavaria tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha noqotee, 32 jirkaan ayaan haatan aheyn xiddig safka koowaad ka sii ciyaari kara Bayern, iyadoo ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain uu haatan ku jiro bilooyinkii ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa, wuxuu qirtay inuu jeclaan lahaa in uu tartan cusub ka ciyaaro.
Martinez oo ka hadlaya shirkiisa jaraa’id ka hor kulanka Champions League ee ay Bayern la ciyaari doonto kooxda Atletico Madrid ayaa yidhi: “Tani ma aha xilligan aan ka hadlayno waxa dhici doona Juun 2021. Wax walba way dhici karaan. Sanado waaweyn ayaan halkan ku soo qaatay, waana arki doonaa waxa dhaca.
Waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo wax cusub, meel kasta oo ay doontaba ha noqotee, laakiin wax cusub ka hor intaanan dhammeynin xirfadeyda, qandaraaska ayaa sheegaya inuu yahay sanadkii ugu dambeeyay. muhiim ah. “
Martinez ayaa shabaqa soo taabtay 14 jeer 251 kulan oo uu u saftay Bayern, halkaasoo uu kula guuleystay sideed horyaal oo Bundesliga ah iyo labo horyaal oo Champions League ah sideedii sano ee ugu dambeysay.